Soo iibso budada Adrenosterone (382-45-6) hplc = 98% | AASraw
/ Products / prohormone / Budada adrenosterone
Rating: Category: prohormone Tags: Budada adrenosterone, Budada Adrenosterone ee iibka, Alaab-bixiyayaasha adrenosterone, iibso budada Adrenosterone
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud oo ah budada Adrenosterone (382-45-6), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada adrenosterone, oo sidoo kale loo yaqaano maaddada Reichstein ee G, iyo sidoo kale 11-keto androstenedione (11-KA4), 11-oxoandrostenedione (11-OXO), iyo xinjir-4-en-3,11,17-trione, waa hormoon steroid oo leh saameyn daciif ah , iyo mid dhexdhexaad ah / hormarin ah 11- crotestosterone. Waxaa markii ugu horeysay lagu xayiray 1936 oo ka soo baxday kortens adrenal byTadeus Reichstein oo ka tirsan Machadka Pharmaceutical ee Jaamacadda Basel. Markii hore, adrenosterone waxaa loo yiraahdaa walxaha Reichstein G. Adrenosterone wuxuu ku dhacaa qiyaasta bani-aadamka iyo sidoo kale nuucyada intooda badan iyo qadar badan oo kalluunka ah, halkaasoo uu yahay horudhac horudhac iyo xinjir, 11-ketotestosterone.
Fiidiyowga adrenosterone video
I. Kaadi adrenosterone Calaamadaha aasaasiga ah:
Name: Budada adrenosterone
Nooca Molecular: C19H24O3
Miisaankani waa: 300.39
Dhibcaha Biyaha: 222 ° C
II. Saacadda budada adrenosterone
COMMON BRAND (S): budada adrenosterone
MAGACA GUUD: 11-OXO, budada Adrenosterone, Walxaha Reichstein G, 11-keto iyorostenedione (11-KA4), 11-oxo androstenedione (11-OXO), iyo -4-en-3, 11, 17-trione
2. Daawada budada adrenosterone Isticmaal:
Qofkasta oo si qoto dheer uga qaybqaatay adduunyada jidh-dhiska iyo bulking-ka ayaa yaqaanno budada Adrenosterone iyo sida faa'iido leh ay u noqon karto marka si haboon loo isticmaalo. Ugu yaraan 2 kala duwan oo ah walxo budo ah oo loo yaqaan 'Adrenosterone' ayaa lagu magacaabay abaalmarin ku saabsan abaalmarinta adduunka ee jirka jirka iyo dhibaatooyinka ugu xun ee la soo sheegay inay kudhacan yihiin isticmaalka khaldan ama hababka xun ee PCT. Patrick Arnold wax badan ayuu sameeyay si uu u helo noocyada Adrenosterone ee suuqa oo wuxuu ahaa jiilka kiimikada ee dunida oo muujiyay sida ay waxtar ugu leedahay isticmaalka hormoonka hormoonka isticmaala wax yar oo aan wax saameyn ah lahayn. Waa mid ka mid ah alaabooyinka ugu caansan ee la aqoonsan yahay taas oo runtii ka dhigaysa isbeddel yaraanta dufanka inta lagu gudajiro habka baaxadda.
3.Waa maxay qiyaasta budada Adrenosterone?
Waxaa jira wareegyo kala duwan oo 3 ah oo isticmaala Adrenosterone powde (CAS 382-45-6). Waxaa jira farqi calaamadeysan oo natiijooyinka sareeya qiyaasta qiyaasta, laakiin xaddiga sare waa in loo isticmaalo wakhti yar. Waxaad qaadan kartaa qiyaasta ugu badan ee sheyga ee wareegga ugu sarreeya, laakiin waxaad u baahan tahay inaad sameyso diyaargarowga ka hor iyo ka dib si aad uga fogaato waxyeelooyinka.
300mg loogu talagalay wareegga toddobaad ee 9
600mg loogu talagalay wareegga toddobaad ee 7
900mg loogu talagalay wareegga toddobaad ee 5
Iyada oo qiyaasta yar ee 300mg ayaa guud ahaan aad u yar in lagu arko guulaha muruqyada, laakiin dhab ahaantii waxay saameyn ku leedahay dhisidda murqaha halkii dufanka. Qiyaasta dhexe ee 600mg waxay u muuqataa inay muujinayso natiijooyin wanaagsan iyo faa'iidada wadarta guud ee muruqyada ee ugu yaraan xaddiga 5. Qiyaasta 900mg ee xad dhaafka ah waxay muujin kartaa kororka muruqa ee xaddiga 10 ama ka badan. Waa mid aad u la mid ah natiijooyinka lagu arko xeryahooda xooggan, laakiin ugu yaraan saameyn dhinaca.
Waa inaad bilowdid inaad isbeddel ku sameyso cuntada isbuucyada 2 ka hor inta aanad bilaabin wareegga aad dooratay. Waa mid waxtar leh in la qaato maalin kasta oo dheeri ah oo isugu jira noocyo kala duwan iyo saliid kalluun. Waa in aad kordhisaa qaadashada borotiinka markaad buuxiso wareegga. Sababtoo ah hormoonadaada ayaa isbeddelaya ka dib marka la joojiyo isticmaalka budada Adrenosterone waxaa loo baahan yahay in la qaato badeeco daweyn oo wanaagsan oo loogu talagalay 4 illaa toddobaadka toddobaadka ka dib wareegga. Looma baahna in lagama maarmaan noqoto haddii aad samaynaysid wareegga xaamilada ee 6 ee 9mg, laakiin qiyaasta sare waxay u baahan tahay isticmaalka badeecad PCT wanaagsan. Natiijooyinka ugu wanaagsani waxay dhacaan markaad si habboon u diyaariso oo u dulqaadato samaynta jidhkaaga oo loo isticmaalo isbedelada.
4.How budada adrenosterone way shaqaysaa?
Marka la qaato sida loogu talagalay iyo u shaqeynta wareeggaagaaga si haboon waxaad ku arki doontaa jirkaaga kantaroolka kantaroolka kaddibna ku raaxayso xayawaanka. Waxay sidoo kale xajin doontaa dheellitirka estrogen ee heerarka xoojiya kartida aad u leedahay kor u qaadista murqaha waxayna yareyneysaa baruurta. Inta badan dadka isticmaala soo jiidashada waa mid aan macquul ahayn oo keliya in ay ka dhigto unugyada muruqyada murqaha oo fudud oo dhakhso badan, laakiin waxay siisaa sharaxaad ka fiican waxa aad abuureyso. Waxay bixisaa habka:
Iska yaree estrogen;
Xakamee saameynta cortisol;
Iska yaree SHGB;
Soo celinta shaqada HPTA;
5.Benefits of budada Adrenosterone
Waxaa jira waxyaabo badan oo faa'iido leh oo loo isticmaalo daawada Adrenosterone oo ka samaysan waxyaabo kale, laakiin ugu muhiimsani waxa weeye in qaab-dhismeedka aan-methylated uusan adagayn beerkaaga. Uma baahnid in aad jidhkaaga ku dhajisid badeecooyin si aad u ilaaliso unugkan muhiimka ah. Waxay qaadataa walaaca waxayna lacag u kaydisaa alaabta dheeraadka ah. Inaad rabto inaad kordho jirdhiska waa inaanad marnaba noqon kharashka caafimaadkaaga iyo budada Adrenosterone waxay ka caawisaa labadaba.
Saameynada Dhibleyda ah
Budada Adrenosterone ayaa loo roonaadey sababtoo ah khafiifka iyo xaddiga yar ee saameynaha. Waxay ka bilaaban kartaa madax-xanuun khafiif ah illaa lallabo, laakiin haddii aad sameyso diyaarinta saxda ah iyo barnaamijka ka dib waxaad u badan tahay inaadan xitaa la kulmin kuwaan. Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto xanuun yar oo hooseeya markaad ka shaqeyneysid, xoogaa kor u kaca cadaadiska dhiigga iyo dhibaatooyinka hurdada haddii aad qaadato qiyaaso goor dambe maalinta. Wakhtiga aad qaadanaysid alaabtu waxay u egtahay in lagu xalliyo dhibaatooyinka hurdada.
Faa'iido kale oo ka dhigaysa budada Adrenosterone caan ah waa inaad adigu u adeegsan kartaa si gaar ah loogu bartilmaameedo dufanka iyo isticmaalka badeecooyin dheeraad ah si kor loogu qaado qiyaasta murqaha. Waa caadi in la arko alaabtan oo loo isticmaalo in ka badan hal unug kale. Tani waxay ka dhigeysaa xulashada ugu fiican ee dhammaan heerarka jirdhiska iyo jirdhiska jirka ee la doonayo. Waa mid ka mid ah hormoonada hormoonnada ee suuqyada.
7. Macmacaanka budada ah ee loo yaqaan 'suprenosterone'
Haddii aad raadineyso alaab kaa caawin kara dhisida muruqyada si wanaagsan loo qeexay oo laga tirtiro baruurta inta lagu jiro nidaamka markaas waxaad u baahan kartaa inaad tixgeliso isticmaalka hormoonka hormoonka. Budada Adrenosterone waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan suuqa oo ilaa maanta. Waa wax aad u firfircoon oo xaddidan oo saameyn kara.
Kaadida Adrenosterone waa hormoon aan hormoon ahayn oo loo isticmaalo miisaanka culays-saareyaasha iyo jidh-dhiska jirka si loo yareeyo baruurta, kordhiyo murqaha iyo murqaha. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah hormoonada hormoonka ah ee ugu da'da yar waxayna bixisaa waxyeelo ka yar inta ugu badan. Way adagtahay beerka inta uu socdo wareegga isticmaalka waana la xakameyn karaa, ama waxaa si fudud loo isticmaali karaa maaddooyinka kale. Waxaa caadi ahaan laga helaa daawooyinka kiniinka ama budada. Waa mid ka mid ah qiyaasaha hormoonka ah ee qaaliga ah ee la heli karo, laakiin heerka hooseeya ee saameynaha iyo dabacsanaanta isticmaalka waxay ka dhigtaa mid ka mid ah alaabta caanka ah ee halkaa laga isticmaalo.
III. Budada adrenosterone HNMR
IV. Sida loo iibsado budada Adrenosterone laga bilaabo AASraw?
Noqo midka ugu horreeya ee dib u eega "budada adrenosterone" Cancel reply